SomaliTalk.com » DASTUUR LAGU DHAQMAA , DOWLAD LAGU DHISAA, DALNA LAGU DEJAA
DASTUUR LAGU DHAQMAA , DOWLAD LAGU DHISAA, DALNA LAGU DEJAA
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Friday, January 13, 2012 // Jawaabaha waa la xiray
Waxaa inta badan aad moodaa in mudooyinkan umada soomaaliyeed ay garwaaqsadeen in aan marnaba dowlad iyo midnimo iyo nidaam toona iman karin inaan nabad la hirgelin karin haba yaraatee wax kala danbayn ahna la helaynin ilaa dalku ka yeesho dastuur iyo sharci iyo garsoor maahee.
Hadaba dastuurka hadda la qorayaa ee qabyada muxuu kaga bedelan yahay kan hada noo qoran ee axdi qarameedka ku meelgaadhka ah 71ka qodob iyo lifaaqyada la socda miyaa lagu dhaqay dadkan soomaaliyeed mise wax kale ayaa lagu dhaqaa?
Dastuurka umad leedahay waa lagama maarmaan waxaana lagu helayaa wax walba tusaale ahaan hadaan soo qaadano waqtigii hore umadeenu waxay lahayd dastuur ay ku dhaqmaan waxaana loo yaqaanay (Xeer jajab) xeer jajabkaas umada soomaaliyeed haddaan dib ugu noqono wax waliba waxay lahaayeen xad iyo xeer xitaa qodob kasta oo ka mida xeer jababkaas ninkii jebiyaa waxuu la kulmayay (ciqaab, ganaax , xaal ama xil iwm ) iyada oo aan lagu xadgudbayn waxii lagu heshiiyay lagana dhimayn lagaba badinayn waxaa kaaga sii daran ma ahayn wax qoran oo buug laga eegayo oo qodoba tirooyin iyo cadadyo ku suntan kala duwana ee dhamaantood inta geed hoostii lagu sameeyay ayaa nin waliba maskaxda ku haystay lamana jebinayn.
Haddaba iyada oo bulshada qaarkeed si qaldan u fahmaan macnaha dastuur ama xeer bulsheedka umadi ku heshiiso waxaan aaminsanahay in habdhaqanka bulsho iyo caqiido haddii la waafajiyo laguna saleeyo cadaalad aanu keenayn xumaan umada muslinka ah wada tashiga iyo balanta iyo heshiiska aan diintooda waxba u dhimayn dantoodana ay ku gaadhaan waa u xalaal.
Sida aan ognahay waxaa dastuur kasta iyo axdiqarameed walba oo soomaalidu ku heshiiyo qodobka ugu horeeyaa waa inuu shareecada islaamka wax walba saldhig u tahay hadana waxaaba u codeeyey baarlamaanka soomaaliyeed ee ku meelgaadhka ah.
Hadaba waxaa ku xusan axdi qarameedka dowlada ku meelgaadhka ah qodobo badan oo aad moodo inaan la hirgelin lana isticmaalin tixgelintoodii iyo awoodoodiina meesha laga saaray.
Hadaan tusaale u soo qaato qaabka maamul goboleedyada hada buuqa badan ka taagan yahay waxaa ku xusan inay laba gobol iyo ka badan noqon karaan maamul goboleed iyada oo afar ama shan ay wadaagi karaan magaca maamul goboleed keliya.
Qodobkan waxaad moodaa dowlada ku meelgaadhka ah iyo maamulgoboleedyada is magacaabayba inaysan tixgelin ee xaalkodu yahay jaantaa rogan.
Qodobka labaad ayaa ah inay dowladu samayso maamul goboleedyada oo maamulgoboleedka iyo inta noqonaysa ama qaabka maamul goboleedka loo aqoonsanayo ay noqoto mid hoos imanayaa dowlada ku meelgaadhka ah ama mid jiray ha noqdo ama mid cusub taas lama qiimayn oo maamulgoboleedyadu iskood ayay isku magacaaban iskoodna xuduud iyo magacyo ayay u samaystaan.
Mid wax dhibaato ah malaha haddii la buuxiyo shuruuda laba maamulgoboleed iyo ka badan waa in bulshada meeshaas degan ay iyagu ku heshiiyaan qaabka awoodqaybsiga iyada oo tirada deegaanka laysku qiimaynayo oo deegaanka laba degmo ama ka badan ku leh gobolka uu ka saami badnaan doono dhinaca xubnaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka maamul goboleedka qolada deegaanka hal degmo ku leh.
Ilaa hadda marka laga reebo arinta somaliland oo ka duwan maamul goboleed oo iyagu ku dhawaaqay magac jamhuuriyadeed taasina ka bedelantahay marxalada maamulgoboleedka waxaa la odhan karaa , Maamulgoboleed rasmiya waxaa ka jira maamulka Puntland deegaan ahaa waa laba gobol iyo badh.
Halka weli muranku ka taaganyahay degmooyinka iyo deegaamada ay sheegtaan qaarkood balse tusaale ahaan (Galmudug) ma buuxin hanaankii iyo habkii maamulgoboleed baaxada dhulka iyo deegaanka awgiis kama hadlayo dhinaca maamulka .
Degmada gaalkacayo waxaa xuduud ku leh labada maamul ee Puntland iyo Galmudug
Gobolka mudug waxuu ka kooban yahay intanoo degmo:-
Galdogob = Puntland
Xara dheere = Alshabaab
Hobyo = Budhcad badeed iyo beelo
Haddaba maamulka Galmudug intee ayuu xukumaa baaxad ahaan dhul maadaama xitaa afartii degmo ee gobolka Mudug aysan hoos iman xitaa badidoodu, taasi waxay cadaynaysaa inuusan buuxin shuruudihii maamulgoboleed looga baahna.
Waxaa kuu soo raaca maamulada ka jira gobolka galguduud oo iyagu fara badan kooxo diimeedyada ay kala xukumaan ayaa iyaguna ahayn maamul dhamaystiran inkastoo labada maamulba talada dalka wax ku leeyihiin Galmudug iyo kuwa Galguduud jooga.
Gobolada ka bilowda hiiraan ilaa laga gaadho xadka kenya ma jiro meel si rasmiya loo odhan karo waa gobol dhamaystiran oo buuxiyay kaalintii maamulgoboleed ee axdiga ku meelgaadhka ah ku qeexday ama gobol ay samaysay dowladu midkoodna ma jiro.
Sida ku cad axdi qarameedka Qodobka 11aad
1. Dowladda Federaalka ee Ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay
yeelan doontaa xukun qaybsan oo ku salaysan nidaamka federaalka.
2. Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay ka kooban tahay:
a) Xukuumadda Federaalka ee Ku Meel Gaarka ah
b) Dowlad-Goboleedyo (Labo gobol ama in ka badan oo israaca, iyadoo la
dhowraayo rabitaankooda xorta ah)
c) Maamulada Gobolada iyo
d) Maamulo Degmo
Sida ku cad qodobkan ma jiro maamul goboleed buuxiyey ama dowlad ku meelgaadhka oo samaysay siyaasad ku saabsan hanaanka iyo habaynta maamulgoboleedyada iyo dhismaha dowlad federaal oo dhamaystiran mana jirto ilaa hada cid taabaglisay qodobkan iyo kuwa badan oo kale.
Hadaba sida ku cad qodobka 11aad Farqada sadexaad axdiqarameedka ayaa saldhig u noqonayaa dastuurka cusub arintanina waxaad moodaa inaan baalmaray oo aysan shaqaynin maadaama dastuurka cusub uusan ilaa hada isaga laftiisu kala xadayn qaabka maamulgoboleedyada iyo ilaalinta xuquuqda deegaanka bulshada soomaaliyeed kala degantahay.
Sida ku cad lifaaq koowaad ee axdiqarameedka dowlada ku meelgaadhka awoodaha dowlada ku meel gaadhka waa sidan:-
AWOODDAHA XAKUUMADDA FEDERAALXA KU MEEL GAARKA
Dowladda Federaalka ku Meel Gaarka waxay ku lahaanaysaa dalka oo dhan awoodaha
1. Arrimaha Dibadda.
2. Difaaca iyo Nabadgelyada.
3. Lacagta iyo Bangiga Dhexe.
4. Dhisidda Dowlad Goboleedyada.
5. Boostada iyo Isgaarsiinta.
6. Socdaalka iyo Jinsiyad bixinta.
7. Maamulka Dekedaha iyo Garoomada diyaaradaha.
8. Qorshaynta iyo Horumarinta Dhaqaalaha.
9. Khayraadka Dabiiciga ah.
10. Duulista Hawada (Civil Aviation).
11. Ilaalinta Deegaanka.
12. Oggolaanshaha iyo bixinta Ruqsadaha shirkadaha gaarka ah, gaar ahaan kuwa
13. Ururinta Canshuuraha, soo dejinta/dhoofinta iyo canshuuraha dadban.
Waxaa ka muuqda qodobka afaraad inay awoodaha dowlada ku meelgaadhka ka mid tahay (Dhisida Maamulgoboleedyada) hadaba ma jiraa hal maamulgoboleed oo ay dowlada ku meelgaadhka dhistay ama ay ka qaybqaadatay dhisitaankiisa iyo maareyntiisa toona.
Ma jiraa hal maamulgoboleed oo dowlada ku meelgaadhka ah baarlamaankeeda golaha sharcidejinta la hor geeyay oo ay cod u qaadeen aqlabiyadna ku ansixiyeen jiritaanka maamulgoboleedkaas.
Iyada oo waxaas oo dhan aan la xaalayn ayaa hada waxaa soo baxayaa isna soo tarayaa ku talaxtaga iyo burinta qodobada aan soo sheegnay iyada oo dastuurka qabyo qoraalka ah muxuu ka qabaa arimahan sidee buuse u maarayn karaaa iyada oo ay jiraan ka badan 50 maamul goboleed oo magac u yaala kuna wada salaysan beelo, dhibaatooyinka inagu soo fool leh iyo xuduudaha maamulgoboleedyada faraha badan oo isu bedeli doonaa colaad mar kale inay ka abuuranto tuulo heblo annagay na raacaysaa iyo annaga maamulkeena ayay hoos timaadaa, inaan sixitaankeeda iyo jaangooynteeda iyo sarfeey marinteeda labaatan sano oo kale ku lumino..
Waxaa haboon inay bulshada soomaaliyeed iyo Gudiga dastuurka gebi ahaan golayaasha kala duwan ee dowlada ku meelgaadhaka ururada bulshada rayidka ah aqoonyahanada soomaaliyeed ay ka hortagaan dhibaatada maahmaah soomaaliyeed ayaa waxay tidhaahdaa (Daadku intaanu ku soo gaadhin baa layska moosaa)
Waa in dib loogu noqdaa 1960kii 8 Gobol ee xaqa ahayd , Cadaaladana ku salaysnayd Lixdii Gobol ee Koonfurta Bariga iyo Bartamaha ahayd iyo Labadii Waqooyiga haddii aan halkaas xal laga dayin waxaa iman doonta ismaandhaaf xuduud dhuleed iyo in dadka soomaaliyeed kala fogaado gebi ahaan
Waxaa lagaga hortagi karaa dhismaha Goladii hore ee sideeda ahaa in dib loogu noqdo si looga badbaado burbur qolyaha gudiyada Dastuurkana waxaan kula talin lahaa wadankan waxuu u burburay cadaalad daro ee dib dalka hawgu celinina waxaad qortaan waxaa ka danbaysa codeyn (Haa iyo Maya) afti la qaadi doonee taariikhda ayaa idin xusi doonta ama idin xidhi doonta .
Maamulgoboleedyada jira ee xaqdarada lagu aqoonsaday iyo kuwa leh hanala aqoonsadoba waa inay dowlada ku meelgaadhka ah wax ka bedeshaa oo dastuurka cusubna lagu saleeyaa sida ku xusan axdiqarameedka. In dastuurka ay garab socoto tirakoob iyo in afti laga qaado shacabka oo aan la afduubin shaqsi kasta oo soomaaliya dal iyo dibadna loo codeeyo dastuurkani mana anfacaa mise nama anfaco qof walibana rabitaankiisa ku codeeyo .Waxaan qoraalkayga ku soo afjarayaa dastuur lagu dhaqmaa , dowlad lagu dhisaa!!!
Dastuur lagu dhaqmaa
Dowlad lagu dhisaa
Dadna lagu wadaa
Danta lama huraan
Dalka iyo dadkaba
Dadkaygoow la soco
La soco Qoraalkan oo yeelan doona qaybo badan …………………………………………….